उद्यम र व्यापार फरक–फरक कार्य हो। तर हामीले परम्परागतरूपमा यी दुवै कार्य समान हो भन्ने किसिमले बुझ्छौं। अन्तर खोज्ने प्रयास गरेनौं। किन होला? उद्यम भनेको नितान्त नौलो सोच सहितको नौलो किसिमको व्यापार गर्नु हो। परम्परागतरूपमा चलिआएको व्यापारको अनुकरण नगरेर नयाँ किसिमको व्यापार गर्नु र ग्राहकहरूलाई त्यस किसिमको व्यापारमा आबद्ध गराउनु हो। त्यसकारण उद्यमीहरूले नयाँनयाँ किसिमका व्यापारको खोजी गर्दछन् र त्यो नयाँ व्यापारमा संलग्न हुन सामान्य नागरिकलाई प्रेरित गर्दछन्। फेसबूक, माइक्रोसफ्ट, गुगल, उबर, भाइबर, एपल, एमेजन आदि उद्यम हुन्, व्यापार होइन। यी नितान्त नौला व्यापार हुन्। पहिले नगरिएका वणिक कार्य हुन्।
नेपालमा किन व्यक्तिहरूले उद्यम गर्न मन पराउँदैनन्? अथवा नेपालमा किन उद्यमीहरूको अभाव भएको होला? यो प्रश्न ज्यादै जटिल र अर्थपूर्ण पनि छ। नेपालमा युवा एवं विद्यार्थीहरूलाई उद्यमी नतुल्याउनमा सरकार र समाज दुवै पक्ष उत्तिकै दोषी छ। सरकारले उद्यमीहरू उत्पादन गर्ने किसिमको शिक्षा नीति ल्याउन सकेको छैन। यस विषयमा सरकारले पर्याप्त गृह कार्य पनि गरेको छैन। हाम्रो शिक्षा नीतिले विषयवस्तुको ज्ञान त दिन्छ, तर त्यो ज्ञानलाई व्यावहारिक किसिमले प्रयोग गरेर स्वतःरोजगार सृजना गर्ने किसिमको सोच, आँट र सीप दिंदैन। ज्यादै न्यून सङ्ख्यामा मात्र विद्यार्थीहरूले औपचारिक अध्ययन समाप्त गरेपछि कुनै व्यापार सञ्चालन गरेको पाइन्छ। ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू कुनै सङ्गठनमा गएर जागिर खाएको पाइन्छ।